Hidhamtoota Siyaasaa Oromoo 6 irratti murtiin hidha hanga waggaa 20 murta’e – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooHidhamtoota Siyaasaa Oromoo 6 irratti murtiin hidha hanga waggaa 20 murta’e
Hidhamtoota Siyaasaa Oromoo 6 irratti murtiin hidha hanga waggaa 20 murta’e
Manni murtii walii gala Oromiyaa Dhaddacha Dhaabbii Daalattii oolmaa guyyaa har’aa ooleen hidhamtoota siyaasaa galmee Obbo Caalaaa Taammiruu jala jiran shan irratti murtii hidhaa waggaa digdamaafi isaa gadii dabarsuusaa Abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Guddannee Fiqaaduu bilbilaan OMN-tti himaniiru.
Hidhamtootni kunniin waggaa tokko dura bakka garaa garaatii kan qabaman yoo ta’u, yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa Bilxiginnaa kan Naannoo Yuunvarsiitii Finfinnee Caffee Araaraa jiru keessatti dararamaa turuu isaanii maatii isaaniirraa odeeffachuun OMN gabaasaa tureera.
Ragaa Abbaan alangaa dhiheeffate manni murtii kufaa taasisee ture kan jedhan Obbo Guddanneen, ragaa viidiyoofi sagalee yeroo qorannoo yakkaa sagalee amantaa isaanii poolisiin dhiheesseen murtiin kun darbuu danda’es jedhaniiru.
Hidhamtootni siyaasaa kunniin reebichaafi dararaa poolisiin isaan amansiisuuf irratti raawwate sodaatanii, waan hin raawwatin akka amanan mana murtiif himanis, manni murtichaa sagalee isaaniif bakka osoo hin kennin murtii dabarse jechuun, murtii kana mormuuf adeemsa oliyyannoof of qopheessaa akka jiranii Abukaattoon isaanii kun himaniiru.
Himatamaa 1ffaafi 2ffaa Caalaa Taammiruufi Annisaa Geetachoo hidhaa waggaa 20, Liidiyaa Abarraa waggaa 6, Sanyii Amsaaluu waggaa 3fi ji’a 6 akkasumas Soolan Haayilee waggaa 2fi ji’ 9, Lataa Wiirtuu hidhaa ji’a 6 kan itti murtaa’e ta’uu, Abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Guddannee Fiqaaduu bilbilaan OMN-tti himaniiru.
Amhara supremacists’ declaration of war against Oromummaa (Oromo People)